आकाश निलो किन हुन्छ ? Why Sky is Blue? – सुदुरन्युज डट कम - Sudur News.com – ताजा समाचार, सूचना अथवा भिडियो हरु
द्वारा : कबिता जोशी मे 19, 2021
सम्बाददाता : कबिता जोशी मे 19, 2021
आकाश निलो किन हुन्छ भनेर जान्नुअघी सर्वप्रथम हामिले सुर्यको ’boutमा सोच्नु पर्छ। जब सुर्यले किरण दिन्, ति सुर्यका किरणमा सात रङ्गहरु निस्किने गर्दछन। बैजनी , इंडिगो (निल रंग), निलो, हरियो, पहेंलो, सुन्तला र रातो (Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red), यि रङ्गहरु मिलेर सेतो रङ्गमा परिणत हुने गर्दछ।
हाम्रो वातावरणमा विभिन्न प्रकारका ग्यासहरु, धुलोका कण, जलवायु, राग जस्ता चिजहरु वायुमण्डलमा रहेका हुन्छन। जब सुर्यको किरण हाम्रो वायुमण्डलमा प्रवेश गर्दछ, तब सुर्यका किरण वायुमण्डलमा रहेका ग्यास, धुलोका कण, जलवायु आदी सँग ठोकिएर वातावरणमा मिसिन्छ। त्यस बेला सुर्यका किरणमा रहेका सात रङ्गहरु वायुमण्डलमा रहेका ग्यास, धुलोका कण, जलवायु आदी सँग फैलिन्छ। जुन रङ्गको Wavelength (तरङ्गलम्बाई) वढी हुन्छ, त्यो रङ्ग कम फैलिन्छ। जस्तै रातो, पहेलो, सुन्तला र जुन रङ्गको Wavelength (तरङ्गलम्बाई) कम हुन्छ, त्यो रङ्ग वढी फैलिन्छ। जस्तै वैगिनि, निलो, आकाशी र हरियो। यि रङ्गहरु मा किरणको फैलिने झुकाव वढी हुने गर्दछ। यि सबै रङ्ग वढी फैलिए प्रस्तात पनि आकाश निलो नै देखिन्छ।
आकाश निलो किन हुन्छ?
आकाश अरु रङ्गको देखिदैन निलो रङ्गको मात्र देखिनुको कारण हाम्रो आखाँ हुने गर्दछ। त्यो हाम्रो आखाँको Sensitivity नै हो। जसले आकाशलाई निलो देखाउछ। हाम्रो आखाँले ३८० Nanometers देखि ७५० Nanometers को Wavelength (तरङ्गलम्बाई) रङ्गको पहिचान गर्न सक्छ, न यो भन्दा कम न यो भन्दा बढी। जब हामि vision strop graph मा हेर्छौ त्यहा निलो रङ्ग एक मात्र यस्तो रङ्ग हो। जसमा हाम्रो आखाँको Sensitivity अरु बढी हुन्छ।
निलो रङ्गको Wavelength (तरङ्गलम्बाई) ४५० Nanometers देखि ४९५ Nanometers सम्म हुन्छ। आखाँको sensitivity यहि color मा सब भन्दा बढी पर्ने गर्दछ। त्यसै गरि violet color को Wavelength (तरङ्गलम्बाई) ३८० Nanometers देखी ४५० Nanometers सम्म मात्र हुने गर्दछ। जसमा हाम्रो आखाँको Sensitivity निलो को भन्दा कम हुन्छ। त्यसैले हामिलाई आकाश निलो देखिन्छ।
जिज्ञासा, प्रश्न र सुझाव भए प्रतिक्रियमा उल्लेख गर्नहुन अनुरोध गर्दै, विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धि अन्य जानकारीको लागि सुदुर न्युज संगै रहनु होला भन्न चाहान्छु । धन्यवाद !
blue skyआकास निलो किन हुन्छ
Kabita Joshi is Tech enthusiast, public health worker and social worker. She has been working in the sector of inclusive development in Far-western Nepal.
महेंद्र सिंह धोनी र सुरेश रैना द्वारा अंतर्रास्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास